Sucuudiga miyuu bartilmaameedsanayaa dadkii u dooday Jamaal Khaashuqji? | Warmaalnews.com
Sucuudiga miyuu bartilmaameedsanayaa dadkii u dooday Jamaal Khaashuqji?
Baaraha matalaya milkiilaha shirkada Amazon Jeff Bezos ayaa sheegay in Sucuudi Carabiya ay u dhacday teleefanka Mr Bezon ayna galaangal u yeelatay xoggihiisa khaaska ah.
Gavin de Becker ayaa baaritaankaan waxaa u igmaday Mr Bezos si uu usoo ogaado sida fariimihiisa khaaska ah loogu dusiyay wargeyska National Enquirer tabloid.
Mr de Becker ayaa la xiriiriyay jabsashada fariimaha gaarka ah ee Jeff Bezon tabintii wargeyska Washington ee dilkii weriye Jamal Khashogji, kaasi oo lagu dilay qunsuliyada Sucuudigu ku leeyahay Istanbul.
Dowladda Sucuudi Carabiya ayaana wali ka hadlin eedeymahaan loo soo jeediyay. Mr Bezon ayaa sidoo kale ah milkiilaha wargeyska Washington Post.
Mr de Becker ayaa sheegay inuu ku wareejiyay macluumaadka uu soo aruuriyay saraakiisha federaalka ee dowladda Mareykanka.
“Baarayaasheena iyo tiro kale oo khubarro ah ayaa soo gebagebeeyay warbixino lagu kalsoon yahay oo ah in Sucuuudigu uu galaangal ku yeeshay telefanka Bezos, ayna ka heleen warbixino khaas ah,” ayuu ku yiri warbixin uu ku daabacay y bogga Daily Beast.
Xoggaha uu soo aruuriyay Mr de Becker ayaa imaaneyso kadib markii Mr Bezos uu ku eedeeyay bishii Februay shirkadda warbaahinta ee Mareykanka laga leeyahay ee (AMI) inay sumcad dil ku sameysay, isaga oo sheegay inay ugu hanjabtay inay daabaceyso sawiradiisa khaaska ah haddii uusan sheegin in warbixinada laga qoray ay yihiin kuwa aan siyaasad ku shaqo lahayn.
Wargeyska The National Enquirer ayaa daabacay bishii January eedeymo ah in madaxa Amazon uu ku lug lahaa arrimo sir ah oo hoose.
Warbixinada laga baahiyay ayaa waxaa ka mid ahaa sawiro iyo fariimo qoraal ah.
Mr de Becker ayaa sheegay in warbixinta shirkada AMI sidoo kale lagu dalbaday inuu sheego in baaritaankiisa lagu soo gebogebeeyay in shirkadan aysan la xiriirin” Wax jabsasho ah oo loo geystay hanaankooda warqabadka “.
Wuxuu ku eedeeyay in dowladda Sucuudiga ay bartilmaameedsatay wargeyska Washington Post, kaasi oo weriye Jamaal Khaashoqji uu wax ku qori jiray.
“Qaar ka mid ah dadka Mareykanka ayaa la yaabi doono markii ay ogaadaan in dowladda Sucuudiga ay ku dadaaleysay inay dhibaateyso aasaasaha Amazon Jeff Bezon, tan iyo bishii Octobar, Kaddib markii wargeysku bilaabay inuu si joogta ah u daabaco warbixinada la xiiriira khaarijinta weriye Khaashoqji,” ayuu yiri Mr de Becker
“Way cadahay in dhaxalsugaha boqortooyada Sucuudi Carabiya Maxamed bin Salmaan uu u arko wargeyska Washington inuu yahay cadowga koowaad,”
Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in khaarijintii weriye Jamaal Khaashuqji ay u baahneyd ogolaanshaha dhaxalsuge Maxamed bin Salmaan, balse Sucuudi Carabiya waa ay beenisay inuu ku lug lahaa.
Qunsuliyada Sucuudigu ku leeyahay Washington ayaanan weli ka jawaabin dalabka Mr de Becker ee ah inay kasoo jawaabto eedeymaha uu u jeediyay sida ay tabisya wakaalada wararka ee Reuters.
Bishii Febraayo, wasiirka arrimaha dibedda ee Sucuudiga ayaa sheegay in dalkiisa” uusan wax lug ah ku lahayn ” warbixintiii wargeyska National Enquirer reporting ee arrinta Mr Bezos.
Shirkada AMI ayaanan weli ka hadlin eedeymaha loogu soo jeediyay baaritaanka Mr de Becker.
Shirkadda ayaa horey u sheegtay inay si sharci ah u tabisay warbixinta ku saabsan nolosha gaarka ah ee Mr Bezon.